Umcimbi we-India superspreader udonsa abantu abayi-3,000,000 naphezu kokuhlinzwa okusha kwe-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » Umcimbi we-India superspreader udonsa abantu abayi-3,000,000 naphezu kokuhlinzwa okusha kwe-COVID-19
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Ezokuzijabulisa • Health News • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-Superspreader: Umcimbi wenkolo waseNdiya udonsa abantu abayi-3,000,000 phakathi nokuhlinzwa okusha kwe-COVID
Ngenkathi imibuthano yomphakathi ivinjelwe kwezinye izingxenye zezwe, lapho izifo ezithelelana kakhulu nge-Omicron zikhula, uhulumeni wasekhaya eWest Bengal uwuvumele lo mkhosi kulo nyaka.
Ngokwezilinganiso ezingokomthetho, abahambi abangafika ezigidini ezintathu bangase babuthane esiQhingini Sagar esenyakatho yeNdiya emcimbini wokugeza ongokwenkolo emanzini oMfula iGanges.
Izixuku ezinkulu zamaHindu ezizinikele bezikhukhula umfula iGanges, zifuna ukungena emanzini awo. Abantu abavela ezifundeni eziningi bavakashela lo mcimbi, othatha izinsuku eziningi. Bedelela imithetho yobhubhane, bahamba ngamabhasi aminyene, izikebhe, nezitimela baye esiqhingini bese bebuyela ekhaya.
Sekuvele kukhona “ulwandle lwabantu” njengoba abakhulekeli bebuthene ukuzobungaza umkhosi weMakar Sankranti (noma uMagh Mela), isikhulu sendawo IndiaIsifundazwe saseWest Bengal sithe, sengeza ngokuthi iningi labahambi bebengagqokile imaski.
Kusatshalaliswa ama-drones endaweni ukuze afafaze ama-pilgrim amanzi futhi anciphise ukugcwala ngasemfuleni, kodwa lokhu akubavimbi ukuthi bathathe idiphu langempela eGanges.
"Bakholelwa ukuthi uNkulunkulu uzobasindisa futhi ukugeza endaweni yokuhlangana kuzohlanza zonke izono zabo, ngisho negciwane uma bengenwe yileli gciwane," kusho isikhulu samaphoyisa endawo.
Ngokusho kwabahleli, yilabo kuphela abanezitifiketi zokugoma kanye nemiphumela yokuhlolwa kwe-PCR ene-negative abavunyelwe ukuba khona, futhi nokuhlolwa okushisayo sekubekiwe. Kodwa-ke, kunokukhathazeka ngokuthi akukho ukuhlolwa okufanele kokuvikela okungaphoqelelwa, njengoba lokho kungase kuholele ezimeni ezifana nokunyathelana. “
Naphezu kwamalungiselelo, abantu abaningi abazinikele bayageza futhi beqa umkhawulo wabantu abangu-50 ngesikhathi, kodwa asikwazi ukubavimba ekwenzeni lokho,” kusho isikhulu esiphezulu etshela abezindaba zendawo.
Cishe amaphoyisa angama-80 kanye nabasebenzi bokuhlanza abajutshwe kulo mkhosi bahlolelwe ukuthi bane-coronavirus, kubikwe namuhla.
"Lokhu kuzoba ukusakazwa okukhulu," kusho ummeli onxuse inkantolo ukuthi ikhansele lo mkhosi, kusho u-Utkarsh Mishra.
Nakuba imibuthano yomphakathi ivinjelwe kwezinye izingxenye ze India, lapho izifo ezithathelwanayo kakhulu I-Omicron okuhlukile bekulokhu kukhuphuka, uhulumeni wasekhaya eWest Bengal uvumele umkhosi kulo nyaka.
The Inkantolo Ephakeme yaseCalcutta ucele abaphathi ukuthi bagcizelele ukuthi abazinikele bakhethe lokho okubizwa 'ngokugeza nge-elekthronikhi' kulokhu, kubika abezindaba zaseNdiya. Abanye bafake izicelo zokuthola izinsiza zokugeza nge-e ngeposi, kodwa iningi belifuna ukuzihambela mathupha.
Umbuthano ofanayo wamaHindu ngonyaka odlule kukholakala ukuthi uthumele izifo ngokuhlukahluka kweDelta elimazayo ezweni lonke. NgoLwesine, acishe abe ngu-265,000 amacala amasha e-coronavirus aqoshwe, kanti ezinye izilinganiso ziphakamisa ukuthi amanani angakhuphukela ku-800,000 emasontweni ambalwa nje.